Monday, September 3, 2012 Monday, September 3, 2012 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na m na-eme ọtụtụ mmepe, anaghị m ewere onwe m dịka ezigbo onye nrụpụta. Enwere m ike mmemme ma megharia ihe na ibe ma mee ka ọ rụọ ọrụ. Ezigbo onye nrụpụta ghọtara otu esi emepe koodu ahụ ka e wee tụọ ya, ghara iwere ọtụtụ akụ, buru ngwa ngwa, gbanwee ngwa ngwa ma rụọ ọrụ.
Ebe siri ike nke etinyebere ndị ahịa bụ ka ha abụọ nwee nnọọ web saịtị ma ka na-etinye njikọta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke nwere ike ịmepụta ịdabere na ngwa ngwa saịtị gị ga-ebu. Otu n'ime ha bụ bọtịnụ ndị na-elekọta mmadụ. Na Martech, anyị nwere bọtịnụ mmekọrịta na ibe ọ bụla na saịtị ahụ. Ya mere,… ma ọ bụrụ na Facebook ego ibu ngwa ngwa otu ụbọchị, ọ na-ebelata anyị na saịtị. Wee tinye Twitter, Pinterest, Buffer, wdg na nke ahụ ma ohere saịtị gị nke ibudata ngwa ngwa belata ka ọ nweghị ihe ọ bụla.
Nke ahụ ka a maara dị ka synchronous loading. Ikwesiri imecha otu ihe tupu ị na-ebu ihe na-esote. Y’oburu n’ichoo ibu ihe n’enweghi ike, inwere ike ibu ihe n’enweghi ntukwasi obi n’ime ibe gi. You nwere ike meziwanye ọsọ ọsọ nke saịtị gị site na itinye ihe asynchronously. Nsogbu bụ na ederede ederede na ụlọ ọrụ ndị a na-enye gị ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ kachasị nke kachasị mma iji rụọ ọrụ asynchronous.
Nwere ike ịhụ ihe na-emetụta ọsọ ọsọ peeji gị site n'ịgba ule na Pingdom:
Nke a bụ mpempe otu esi eme ya nke ọma site n'aka Emil Stenström:
Ike nke Facebook